Wafdi ka socda aqalka sare oo Kismaayo ku wajahan - Halbeeg News
Wafdi ka socda aqalka sare oo Kismaayo ku wajahan
Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan wafdi ballaaran oo ka socda aqalka sare ee Soomaaliya.
Wafdiga Kismaayo ku wajahan ayaa waxaa hor kacaya guddoomiyaha aqalka sare, mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo qaar ka tirsan xildhibaannada golaha.
Guddoomiye Xaashi ayaa la filayaa in madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubbaland inuu la sii amabqaado dardar gelinta wada hadalladii ay garwadeenka ka ahaayeen guddiga xallinta khilaafaadka ee uu soo magacaabay aqalka sare kuwaasoo ka shaqeynayay isu soo dhaweynta iyo xallinta ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dabayaaqadii bisha ina dhaaftay ayuu guddiga xallinta khilaafaadka soo saaray qodobbo ay ku macneyeen in ay yihiin xulka tabashooyinka dowlad goboleedyada iyaga oo dowladda federaalka ugu baaqay fulinta iyo ka jawaabista tabashooyinkaas.
Dhanka kale ra’isul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyre oo ka jawaabaya codsiga guddiga ayaa soo dhisay guddi ka kooban afar wasiir, kuwaaso ay xukuumadda u xilsaartay in ay la shaqeeyaan guddiga xallinta khilaafaadka ee aqalka sare ee Soomaaliya.
Afeworki oo booqasho taariikhi ah ku tagaya Jabuuti